Sunbathing gba ọtọ na uru ya bụ isi | Bezzia
Susana godoy | 19/06/2022 20:00 | Mma
Ugbu a ihu igwe dị mma dị ebe a, ị nwere ike na-eche ịgba ọtọ sunbathing. N'ihi na ọ bụ otu n'ime omume ndị a na-atụ aro na ọ nwere ọtụtụ uru ị kwesịrị iburu n'uche. N’ezie, mgbe ọ bụla anyị tinyere onwe anyị n’okpuru anyanwụ, anyị aghaghị ịkpachara nnọọ anya iji lekọta akpụkpọ ahụ anyị.
Ya mere, ọ bụrụ na anyị na-eme ya gba ọtọ, mgbe ahụ, ị ​​ga-ewere ya ọbụna karịa n'ime akaụntụ. Dị ka akụkụ ụfọdụ nke ahụ na-enwe mmetụta nke ukwuu karịa ndị ọzọ. Nke ahụ kwuru, ọ dị naanị ka ịmara uru dị n'inwe ike ịsa mmiri ka Chineke webatara gị n'ụwa. Ikekwe n'oge a, a ga-agba gị ume ịhapụ uwe igwu mmiri n'akụkụ!
1 Ịsa anyanwụ gba ọtọ ga-abawanye ọkwa vitamin D gị
2 Mma ọnọdụ
3 Ahụ ike karịa maka obi gị
4 More uche nke nnwere onwe
5 Na-egbochi gị ọrịa shuga
Ịsa anyanwụ gba ọtọ ga-abawanye ọkwa vitamin D gị
Ọ bụ ezie na ọ dịghị mkpa iyipụ ya maka ya. ee na anwụ na-acha ga-eme ka vitamin D dịkwuo mma. Ọ bụ otu n'ime vitamin ndị ahụ dị mkpa maka ọkpụkpụ siri ike na ahụike. Ya mere ọ ga-ewepụ ụdị ọrịa ọ bụla metụtara ha. Na-echefughị ​​na ekele vitamin a nwere ọrụ ndị ọzọ nke ahụ nwere ike ịhazi. Ebe ọ bụ na ọ nwekwara mgbochi mkpali Njirimara. Yabụ ị mara na ọ bụ ihe dị mkpa na ndụ gị na ahụike gị.
Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ịgba ọtọ anwụ anwụ bụ otu n'ime omume kacha mma. Dị ka ọ ga-amụba serotonin na ya, na-eche ihe animated. Yabụ na nke a ga-ebute mmetụta nke obi ụtọ nke kwesịrị anyị mgbe niile. Ma ọ bụghị naanị nke ahụ, kamakwa, site na mmetụta ahụ nke imeziwanye ọnọdụ ahụ, anyị nwekwara ike ikwu na a na-ahapụ nchekasị. Anyị na-agbalị mgbe niile ịchọta nhọrọ iji wepụ onwe anyị na nchekasị na n'ezie, sunbathing nwere ike ịbụ otu n'ime ihe kacha mma. Ị ga-enwe mmetụta nke ọma mgbe niile, na-enwekwu ahụ iru ala na nke ahụ bụ ozi ọma mgbe niile.
Ahụ ike karịa maka obi gị
Ọ bụ igwe bụ isi nke ahụ anyị na ya mere, anyị ga na-elekọta ya mgbe niile. Ya mere, anwụ anwụ dị mma maka obi n'ihi na ekwuru ya lowers ọbara mgbali. Ị maraworị na nke a bụ otu n'ime isi ihe kpatara ọrịa obi dị iche iche. Yabụ, mgbe anyị debere ya n'ọnụ mmiri, anyị ga-enwe mmetụta nke ọma yana kwa, anyị ga-ewepụ ụdị nsogbu niile. N'ezie, anyị ga-ekwukwa ọzọ inwekwu vitamin D n'ihi na ọ bụ ihe ọzọ ga-eme ka obi anyị dịkwuo mma.
More uche nke nnwere onwe
N'ezie na ọtụtụ oge, mgbe ị na-aga n'akụkụ osimiri, ị maara nke Uwe mmiri. Mgbe ụfọdụ, ọ na-esi ike, oge ndị ọzọ ọ na-agbada ma ọ nwere ike ime ka ụbọchị anyị sie ike mgbe niile. Ọfọn, uru ọzọ dị n'ịgbara anwụ anwụ bụ na ị gaghị enwe nsogbu ndị yiri ya. Nnwere onwe ga-abụ nhọrọ gị kachasị mma iji nwee ike ịnụ ụtọ ụbọchị na-eme ihe kachasị amasị gị ma nweta ntakịrị ndụ, ekele maka uru ndị ọzọ anyị na-ekwu.
Na-egbochi gị ọrịa shuga
Ị maara na ịsa ahụ anwụ dịkwa mma maka igbochi ọrịa shuga? Ọfọn, ọ bụ na ị kwesịrị iburu ya n'uche. N'ezie, nke a nwekwara ihe jikọrọ ya na vitamin D, nke yiri ka ọ nwere ike nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla metụtara anyanwụ. Ka o sina dị, inwe ọkwa dị mma nke vitamin a na sunbathing nwere njikọ ma na-enyekwara anyị aka n'ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nke ahụ ike anyị.
Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale anwụ na-agba ọtọ, ị ga-ahụ n'ezie osimiri na-enye gị nhọrọ yana na ị nwere ike ịmalite inwe mmetụta nke ọ bụla n'ime uru dị ka nke anyị na-ekwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Sunbathing gba ọtọ na uru ya bụ isi
Ihe dị iche n'etiti nchegbu na egwu